Soosaarayaasha Filimka Soojaray Plywood & Fancy Plywood- Roc
FILIM FACEED PLYWOOD
OSB (GUDDIGA CODKA EE SOO SAARAN)
Guryaha / Kabadh Isticmaalka
Wax soosaarkayaga noocyada alwaaxda oo dhami waa 1,000,000m3 sanad kasta. Waxaa ka go'an soo saarista iyo dhoofinta alaabada ugu tayada sareysa filimka soo wajahday plywood, plywood macaan, plywood antiskid, MDF, OSB iyo LVL.
WAAN JOOGNAA CAALAMKA
Maaddaama aan nahay shirkad soo saare ah oo caddeeya plywood, MDF, OSB iyo LVL, waxaa naga go'an inaan safka hore ka galno tiknolojiyadda iyo tayada. si isdaba joog ah u hagaajineyno dhammaan meelaha looxyadayada ka kooban. Qalabkeena xasiloon ayaa kaa caawinaya inaad kaalin adag ka gasho suuqa caalamiga ah isla markaana hubiso koritaan waqti dheer ah
OSB (guddiga jihada jihada)
Dhoofinta Ilaa Dtae
Waxaan u Adeegnay
SOO SAARAYAASHA QALABKA IYO DHISMAHA Wadada
Waa maxay Waan Qabnaa
SIDEE AAN U SHAQAYNAA
Shiino Caan ah
Alaabooyin aamin ah
ROCPLEX Adeegyada Wakiilka Sourcing
Wali miyaad ka walwalsan tahay qalabka dhismaha ee ka imanaya Shiinaha? Markaa waxay kuu noqon laheyd xulasho xigmad leh inaad na doorato. Waxaa lagu sifeeyay hal adeegsi wax soo iibsi oo joogsi ah, ROCPLEX waxay awood kuu siineysaa inaad ka soo hesho Shiinaha qaab lama filaan ah laakiin la yaab leh.
Hoos waxaa ku yaal FAA'IIDOOYINKA aad ku raaxeysan karto…
Waaxda wax iibsiga oo heer sare ah iyo waaxda xakamaynta tayada, iyo dabcan, baayacmushtar xirfad leh. Marka ROCPLEX waxay leedahay kalsooni ku filan oo ay ku noqon karto waaxdaada wax iibsiga ee dibedda. 25 sano oo ganacsiga qoyska alwaax ah aan siino kalsooni aan ku qaban karno shaqo wanaagsan oo ku saabsan alaabada dhismaha qalabka wax iibsiga.
ROC International, waa shirkad lagu kalsoon yahay oo wax soo dejinta iyo dhoofinta, waxay leedahay khibrad 25 sano ah oo ku saabsan adeegga wakaaladda soo dejinta iyo dhoofinta. ROC xirfadlaha caalamiga ah ee alaabada qoryaha, Gaar ahaan ganacsiga looxyada. 25 sano alwaax soosaarida iyo dhoofinta waxay kobcisay koox xirfadlayaal ah soosaarida alaabada alwaaxa iyo dhoofinta iyo kormeerka tayada.
Shirkad fasal soo dejin iyo dhoofineed oo kastamyada ah, oo leh xawaare aad u fiican iyo karti kastam, koox hawlgal xasilloon oo qaan gaar ah, oo ku siinaysa adeeg wakaalad soo dejin iyo dhoofineed oo heer sare ah.
Home World Group waa soosaaraha iyo dhoofinta ugu weyn ee plywood iyo badeecooyinka la xiriira ee Shiinaha, oo la aasaasay 1993 iyadoo leh 6 shirkadood. Hadda waxaan ku raaxeysaneynaa 73 khadadka wax soo saarka ee filimka soo wajahay plywood macaan plywood iyo LVL Iyo 12 shirkad wadaag ah oo ka kooban OSB, MDF iyo wax soo saarka guddiga melamine.
Maxay tahay sababta kormeerka ROCPLEX uu uga fiican yahay
Waxaan leenahay kooxda kormeerka tayada xirfadeed ee qalabka looxa.
25 sano munufacturing iyo khibrad kormeer in plywood, MDF, OSB, guddiga melamine, waxyaabaha LVL.
100% Cadaalad ah, xirfadle ah oo adag.
100% kormeerayaal Xirfad leh.
daboolaya aagagga warshadaha Shiinaha.
Waxaan bixinaa adeegyada ugu fiican.
Soo saar warbixinta warbixinta 12 saacadood gudahood kormeerka ka dib.
Waxaan haynaa qiimaha ugu fiican.
In ka badan 25 sano ayaa khibrad u leh soosaarida alwaaxda macaamiisha OEM.
Tan iyo markaas, kooxdeena OEM guddi alwaax ka badan 50 dal oo ku kala yaal shan qaaradood.
Adeegga OEM / ODM
Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa. Waxaan ku leenahay faa iido weyn R&D, caadada laga sameeyay boodhadhka looxyada gaar ahaan kan plywood iyo melamine board.
Iyada oo sanado badan oo khibrad ah la shaqeynta macaamiisheenna adduunka oo dhan, waxaa naloo arkaa lamaane istiraatiiji ah oo la isku halleyn karo iyadoo ay ugu wacan tahay heerka qibrada iyo khibradda lagu bixiyo horumarinta, qaabeynta iyo taageerada ganacsi ee wax soo saarkooda.